शाहिदको नयाँ उचाई
प्रकाशित : आइतबार, असार ०८, २०७६१४:२७
फिल्म । पछिल्लो केहि समययता फ्यामिली ड्रामा फिल्म गरिरहेका अभिनेता शाहिद कपूर एक्सन अवतारमा प्रस्तुत भएका छन् । गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘कबिर सिंह’मा शाहिद मात्र छन् । केहिले यसलाई ‘द शाहिद कपूर शो’ पनि भनेका छन् । पछिल्लो फिल्म‘आर राजकुमार’ मा एक्सन ब्वाईको रुपमा प्रस्तुत भएका शाहिदले यस फिल्म मार्फत सबैको मन जितेका छन् ।
फिल्ममा शाहिदले गरेको अभिनयको तारिफ नगर्ने सायदै होलान् । सन्की र साहसी सर्जनको भूमिका निर्वाह गरेका शाहिदले आफुलाई हरेक सिनमा उस्तै प्रस्तुतिमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो तेलुगु फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ को रिमेक हो भने यसलाई पनि सन्दीप रेड्डी भाङ्गाले नै निर्देशन गरेका छन् । फिल्मले शुक्रबार २०.२१ करोडको ओपनिङ गरेको थियो ।
यसलाई शाहिदको करियरकै ठुलो ओपनिङ भनिएको छ । शनिबार फिल्मले २२.७१ करोडको कमाई गरेको छ । दुइ दिनमै ४२.९२ करोडको कमाई गरेको फिल्मले विकेन्डमा ७० करोड भन्दा बढीको विकेन्ड कमाई गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । विशेष गरि फिल्ममा शाहिदको क्यारेक्टरले युवापुस्तालाई रिलेट गरेको छ । फिल्ममा कियारा एड्वानी उनको अपोजिटमा छिन् ।
‘मिस लिटिल नेवाः ११३९’ उपाधि सनिशालाई
गीत बाँकी राख्दै सकियो ‘गीत गजल’
सलमानको कारण कट्रिनाले छाडिन् फिल्म ?
माघ ४ मा ‘गरुड पुराण’
संजयको फिल्ममा ऋतिक ?
सलमान र शाहरुखलाई चाहियो स्क्रिप्ट